Noho ilay Raharaha vatomamy nitentina 8 miliara? natsahatra amin’ny asany ny minisitry ny Fanabeazana, Andriamanana Rijasoa | NewsMada
Efa nampoizina ? Nilatsaka, omaly hariva ny didim-panjakana manafoana ny fanendrena ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ny fampiofanana ara-teknika sy arakasa, Andriamanana Rijasoa Josoa. Anisan’ny niteraka resabe momba azy ilay vola 8 miliara Ariary nokasaina hividianana vatomamy.
Nivoitra tamin’ny didim-panjakana nosoniavin’ny filoham-pirenena Rajoelina Andry sy ny Praiminisitra Ntsay Christiana ny fanafoanana ny fanendrena ity minisitra ity, ny 29 janoary teo. Hisahana vojimaika hisolo ny toerany ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, i Assoumacou Elia Beatrice.
Nanamarika ity minisitra natsahatra amin’ny asany ity ny momba ilay volabe mitentina valo miliara Ariary, nokasaina hividianana vatomamy, hisotroan’ny mpianatra manerana ny Nosy ilay tambavy CVO. Nitondra fanazavana ny tenany taty aoriana fa tsy mbola notikihina ao amin’ny kitapombolam-panjakana izany vola izany. Natokana ho amin’ny laharam-pahamehana kokoa, araka ny nambarany.
Nianatra sy niofana tany Etazonia
Zary niteraka resabe teny anivon’ny fiaraha-monina, indrindra tany anaty tambajotran-tserasera izany. Tombanan’ny maro fa mety ho anisan’ny antony nampitsaharana azy amin’ny asany izany.
Tsiahivina fa notendrena tamin’ny governemantan’ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny 29 janoary teo ny tenany. Anisan’ireo manampahaizana niasa ny nandranto fianarana tany ivelany, indrindra tany Etazonia, namaly ny antson’ny fitondrana ka nandefa ny mombamomba azy teo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika.
Fiatrehana ny fanadinam-panjakana
Dimy volana ihany izany no nisahanany ny minisiteran’ny Fanabezam-pirenena. Mbola banga izany toerana izany fa ny mpitantana vonjimaika ihany ny Minisitry ny fampianarana ambony. Anisan’ny asa lehibe miandry azy ny momba ny fanadinam-panjakana : ny CEPE, ny BEPC ary ny bakalorea.